Arimaha Bulshada – Page 3 – Wanleweyn – Hoyga Wararka Tayeysan – Wararka Soomaaliya
Xasan Sheekh Oo Xaaladda Ku Xuntahay, Xildhibaanno Badan Oo…
December 29, 2016	Leave a comment 27 Views
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ahna musharrax Madaxweyne waxaa iminka soo galay walwal ah in uusan markale kusoo laaban Villa Soomaaliya, kadib markii la sheegay in uu waayey xildhibaanno uu ku tashanayey. Ku dhowaad 20 xiildhibaan oo markii hore Xasan Sheekh ku garab ahaa ayaa la sheegayaa in markaan ay dhankooda ka baxeen, islamarkaana Xasan waxaa soo wajahay cabsi daran. ...
Faah Faahin: Nin Dhagool Ah Oo Ismiidaamin Ka Fuliyey Jalalaqsi
Warar dheeraad ah ayaa laga helayaa qarax Ismiidaamin ah oo gelinkii dambe ee shalay ka dhacay degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan.. Maxamed Cabdulle Fiidow oo ah guddoomiyaha degmada Jalalaqsi ayaa u sheegay Warbaahinta in qaraxii Ismiidaaminta ahaa ee ka dhacay Maqaayad ku taalla degmada Jalalaqsi uu ku dhintey Hal nin oo is qarxiye ah. Waxa uu sheegay guddoomiyaha in shaqsiga ...
Nabadoon caan ahaa uu lagu Dilay Magaalada Muqdisho
December 29, 2016	Leave a comment 29 Views
Kooxo ku hubeysnaa bistoolado ayaa lagu soo waramayaa in Xalay Degmada Hiliwaa ee Magaalada Muqdisho ay ku Dileen Nabadoon caan ahaa. Nabadoonkan oo lagu magacaabi jiray Axmed Dhoore ayaa labo Ruux waxey ku toogteen Degmada Hiliwaa ee Gobolka Banaadir. Goobjooge ayaa waxuu sheegay in Nabdoonka uu ka soo baxay masjid uu ku soo tukadalay Salaada Cishaha markii la dilayay. Nabadoonkan ...
XOG: Cumar C/rashiid Iyo Musharrax Jibriil Oo Is Fahmay
December 29, 2016	Leave a comment 25 Views
Xog hoose aan helnay ayaa waxay sheegeysaa in xilligaan ay is fahmeen musharraxiinta kala ah Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke iyo sidoo kale Jibriil Ibraahim Cabdulle. Labada Musharrax oo mid walbo rajo aad u wanaagsan ka qaba inuu noqdo madaxweynaha Soomaaliya ee soo socda, ayaa hadana wararka waxay sheegayaan in ay si hoose u kulmeen. Arrinta ugu weyn ayaa ahayd in ...
December 29, 2016	Leave a comment 20 Views
Ikraan Aadan Absuge, waa 26-sanmo jir, waxa ay ugu yar tahay xilidhibaannada Labada aqal ee baarlamaanka Federaalka, gaar ahaan waa aqalka hoose. Wareysi ay bixisey waxay ku sheegtay iney aad ugu faraxsan tahay in xilkaan ay qabato, waxaana ay sheegtay sababaha ku dhaliyey arrintan iney qeyb ka tahay isbedal doon degdeg ah. Dhaarta ay dhaaratay waxay Ikraan ku sheegtay in ...